Ku guuleysto Samsung Galaxy S7! 2 daqiiqo gudahood iyo BILAASH | Androidsis
Haa, haa, waad maqashay si sax ah. Maanta waxaan rabnaa inaanu istcimaalno Samsung Galaxy S7 oo leh dhammaystirka Dahabka dahabka ah iyo 32 GB xasuusta gudaha wiilasha mahadsanid Wareega iyo barnaamijkeeda si loo keydiyo telefoonka.
Sida caadada u ah websaydhadeenna, tartanku wuxuu noqon doonaa mid aad u fudud, markaa ha sugin wax intaas ka badan oo ku sii wad akhriska maqaalka dooro inaad ku guuleysato Galaxy S7 gabi ahaanba bilaash.
1 Sidee loogu guuleystaa Galaxy S7 Gold platinium?
2 Muddada tartanka
3 Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Roams
Sidee loogu guuleystaa Galaxy S7 Gold platinium?
Tani waa sida Samsung Galaxy S7 ay u egtahay xafiisyada Roams
Tallaabooyinka la raacayo si loogu guuleysto Galaxy S7 waa sida soo socota:
La wadaag qodobka iyada oo loo marayo Twitter iyo / ama Facebook. Si tan loo sameeyo waa inaad gujisaa xiriiriyeyaasha soo socda
Halkan guji si aad uhesho
Halkan waxaad kaheli kartaa oo wadaagi kartaa:
Ku rakib barnaamijka Roams telefoonkaaga casriga ah iyo ku xirmaan shirkadda taleefankaaga. Si aad uhesho barnaamijka waa inaad halkan guji. Dabcan, xusuusnow in kaliya kuwa sida saxda ah ugu xiraya hawl wadeenadooda barnaamijka ka dhexqeybgalaya.
Dhameystiran foomka soo socda oo muujinaysa iimaylka aad ka diiwaan gashan tahay Roams. Waxaan kaliya u isticmaali doonnaa foomkaan si aan u qaadno bakhtiyaa-nasiibka oo aan u xaqiijino in dhammaan kaqeybgalayaashu ay si sax ah iskaga diiwaangeliyeen Roams.es. Haddii aad ku hesho barnaamijkaaga xogtaada Facebook ama Google, waa inaad muujisaa emaylka aad u isticmaasho meheraddan si aan si sax ah ugu diiwaangelinno kaqeybgalkaaga. Si aad u hesho foomka halkan guji
Waana taas. Sida aad arki karto, waa geedi socod aad u fudud oo kaliya adoo raacaya kuwa 3 talaabooyin fudud ah waxaad heli kartaa gebi ahaanba bilaash-hadiyad ah.
Tartanku wuxuu ku egyahay xiga maalintii 8aad 23:59 pm. Waqtigaas waan xireynaa qoraalada waxaanna kadhigi doonnaa tartanka dhammaan guuleystayaasha barnaamijka 'random.org'.
Waqtigan xaadirka ah Roams.es waxaa laga heli karaa kaliya Spain, sidaas darteed Tartanku wuxuu ku kooban yahay oo keliya isticmaalayaasha Isbaanishka ka shaqeeya. Laakiin ha ka welwelin inta kale ee akhristayaasheena ah ee ka yimid dalalka kale, maadaama Roams uu ka shaqeynayo caalamiyeynta mashruuca iyo markay taasi dhacdo waxaan ku abaabuli doonnaa tartamo cusub barnaamijka 'Androidsis' si qof walba uu uga qeyb galo.
Ku guuleystaha waxaa loo soo diri doonaa emayl si uu noogu sheego cinwaankooda bixinta abaalmarinta. Haddii aan jawaab la helin, 48 saac ka dib waxaan ku celin doonaa isku aadka ilaa aan ka helno guuleyste.
[Casriyayn]: Waxaan horey u helnay guuleyste taleefanka casriga ah. Isticmaalaha nasiibka leh wuxuu ahaa Victor José de la Cruz Crespo oo kasoo jeeda Granada kaas oo bilaash ku qaadanaya Galaxy S7-kiisa cusub.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Roams
Kuwa aan aqoonin, Roams waa codsi bilaash ah oo aad kula xiriireyso telefoonkaaga telefoonka xakamee isticmaalkaaga megabeyt iyo daqiiqado, qiyaasta qiimaha qaansheegta soo socota iyo ballanqaadka joogitaanka. Macluumaadkan, Roams wuxuu awood u leeyahay inuu soo jeediyo dalab ku habboon astaantaada iyo sidoo kale inuu badbaadiyo heerka taleefanka. Waa mashruuc 100% Isbaanish ah oo hadda kujira wajiga kordhinta raasumaalka (waad awoodaa maal gasho € 26) oo ay ku abaal mariyeen shirkado muhiim ah heer qaran iyo heer caalamiba hal-abuurnimadooda hal abuurka leh sida Microsoft, Google, Facebook ama Banco Santander.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dood-wadaag » Ku guuleysto Samsung Galaxy S7!
Ciise Lopez Morales dijo
Aan aragno inaan nasiib ahay waana markiisii! Isagu isagu! In mobiilkeygu diyaar u yahay hada howlgab. By the way, aad baad ugu mahadsantahay inaad ogaatay, barnaamijka Roams waa cajiib.
Jawaab ku bixi Jesús López Morales
Jawaab Adrian Castiñeira
Manuel Brandy Martin dijo
Pa boqorrada, in hadiyadani aysan culeys saarin
Jawaab Manuel Brandi Martin
Aqoonyahan Garcia dijo
Dhammaantood way dhammaadeen, aad baad u mahadsan tahay iyo nasiib wacan.
Jawaab Escolastico Garcia
Dhammaan waa la qabtay waana qaatay shaashadda diiwaanka arjiga haddii ay dhacdo.
Aad baad u mahadsantahay nasiib wacan.
Jawaab Esco Garcia
alexandra camacho dijo
Waxaan rabaa Galaxi 7
Jawaab Alexadra Camacho
Ku jawaab JoPe
Ma lihi shabakado bulsheed, sideen isu diiwaangeliyaa laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku guuleysto taleefankaas, tayda badh baa la furey
Ku jawaab Loammi
Hadday ahaan lahayd iPhone waxaan isku dhibi lahaa inaan wax walba sameeyo, laakiin Samsung S7 ah? Qashinka
Anigu waxaan ahay ono Vodafone mana jirto wado lagu diiwaan geliyo arjiga ... wax caawimaad ah ???
Waxaan si fudud u jeclaan lahaa inaan kasbado maadaama aanan waligey waxba kasban 🙁
Ku jawaab Sugey soza
Dhammaantoodna waxaan rajeynayaa inaan nasiib yeesho.
Jawaab Bianca Oniga
Ka qayb qaadashada taas App la rakibay, waxay umuuqataa mid wanaagsan.
Ku jawaab jobarber
Samsung ayaa ugu fiican, waxaan u baahanahay taleefanka gacanta
Jawaab Jose Luis jimenez
Waan jeclahay barnaamijka !! Wuu ka qayb galay !!
Jawaab ines diaz g
La dhammeeyay, sawir fiican, mahadsanid!
Jawaab Javier Beltran Carceller
Aan aragno markaan markaan haysto wax aan qabto ..... waa la wada qabtay !! Mahadsanid !!
Jawaab ku sii César Rodríguez Molina
Maxaa la soo dhaafay
Ku jawaab humaworld
Waxaan horay u sameynay isku aadka waxaanan leenahay guuleyste. Waxaan kaa sugeynaa inaad xaqiijiso inaad ku shaaciso barta.
Waad ku mahadsan tahay qof walba kaqeybgalkiisa!
Jawaab Miguel Gatón
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo taleefan gacmeed, wax kastoo gurmad ah oo aan haysanno iyo wax kasta oo aan ku baran karno. Mahadsanid
Ku jawaab Maritza Diaz
Aad baad ugu mahadsan tahay abaalmarinta isla marka ay timaadaba waxaan soo gelinayaa sawir leh Samsung galaxy s7 aad ayaan u mahadsanyahay mar kale aad iyo aad
Weligey waxba ma kasban waxaan rajeynayaa inay wax soo baxaan maanta
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku guuleysto samsung galaxy s7 kani waa marki iigu horaysay ee aan galo bogga looxyada
Waxaan rabaa galax 7 gees
Waxaan jeclaan lahaa inaan kasbado maxaa yeelay waxaan u qoraa tiknolojiyadda ay leedahay darteed
Ku jawaab olira luis gustavo
Waxaan rabaa inaan kasbado maxaa yeelay waan ubaahanahay waana jeclahay tiknolojiyada waan rabaa
Marnaba ma doonayo oo waxaan haystay taleefan gacmeed teknoloji ah waxaan rabaa inaan kasbado waxaan haystaa iimaan
Ku jawaab Dominick
Weligay ma jeclaan oo waxaan haystay taleefan gacmeed wanaagsan, fadlan
Jawaab oscar ronaldo ayon lopez
Jawaab Barbie DIaz
MID HADII AY GUULEYSATU GUULEYSATO SABABO AYAAN rabin inay isiiyaan
Ujawaab BREYNER FERNEY JIMENEZ JIMENEZ
WAA MAXAY IN AAN KU GUULEYSTO SI AAN KUGU guuleysto
Waad salaaman tihiin. Habeen wanaagsan Waxaan rabaa inaan ku guuleysto Cel Samsung s7
Ma haysto wax taleefan ah oo i caawiya waxaan doonayaa inaan ku guuleysto porfa aan imid Mareykanka?
Haye, waxaan ahay Lucy, waxaan ahay 14 jir, ma haysto taleefanka gacanta, ma lihi kiniin, kumbuyuutar ma lihi.
Ku jawaab lucy sofia figueroa
Anigu waxaan ka imid barinas venezuela nunka oo waxba kamaan helin aniga taas oo ah inaan been sheego waxaa jira inaan arko aaminaad
Ku jawaab leonardo romero
Maria jannada dijo
Waxaan rabaa taleefanka gacanta mana garanayo sida loo sameeyo, xal i sii
Jawab Maria Jan
hello aad u wanaagsan tartamadan
fadlan waxaan rabaa inaan haysto taleefankaas waan u baahanahay
Ku jawaab francisbelt
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo taleefan
laakiin waan dhacay oo waan jabay
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo mid
iga caawi fadlan mahadsanid
Waxaan ubaahanahay taleefanka gacanta, ma haysto oo waan doonayaa, fadlan i caawi
Ku jawaab Ludys
Waxaan ubaahanahay taleefanka gacanta fadlan duco
Ku jawaab Jacqueline ortega
hello subax wanaagsan waxaan rabaa hal plizz
Jawaab yajanni rodriguez
Mid baan rabaa fadlan
Jawaab Abel Marcel Ochoa
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku guuleysto Samsungkan fadlan haddii aad awooddo aad iyo aad ayaan ugu baahanahay
Jawaab Jandrelkys Rangel
Waxaan rabaa inaan kasbado
Ku jawaab dayana
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo taleefanka gacanta si aan ula xiriiro qoyskeyga
Aad baan kuugu mahadcelin lahaa fadlan waan u baahanahay Mahadsanid
Ku jawaab Rayckford
Waxaan rabaa taleefan gacmeed, fadlan isii oo aniga ayaa sabool ah, waxaan u baahanahay inaan waco hooyaday maxaa yeelay safar ayey ku tagtay Argentina mana garanayo goorta ay soo noqonayso.
Waxaan rabaa j7kaas fa¡¡¡¡
Ku jawaab giovanny quintero
Haye, sideen uga soo baxay isku aadka?
hello waxaan rabaa inaan guuleysto runta ayaan ugu baahanahay
Ku jawaab joseannys rodriguez
Had iyo jeer waxaan rabaa Samsung s7
Waxaan rabaa j7 fadlan
Waxaan rabaa inaan ku guuleysto samsung s7x fadlan
Jawaab Marlene Naranjo
Haddii Eebbe yahay waxa aad haysato oo dhan, markaa waxaad haysataa wax kasta oo aad u baahan tahay!
Ilaahay wuxuu kuu hayaa furaha mushkilad kasta, iftiin hoos kasta u dhigma, daawo xanuun kasta iyo qorshe cusub maalin kasta.
❀ Mararka qaar arrimuhu uma socdaan sidii aad ka filaysay, maxaa yeelay waxa ku sugaya ayaa ugu wanaagsan Eebbe!
❀ ILAAHAY ayaa wax ka qaada laakiin markuu soo noqdo, WUXUU QAADANAA ...
❀ Mararka qaar waxa ugu fiican ee aan sameyn karno waa inaan istaagno, oo aan sugno ilaahay inuu wax walba daryeelo.
❀ Rumaysadka Eebbe ma sahlo waxyaalaha, laakiin waxay ka dhigtaa kuwa suurta geliya ...
❀ Ha qabsan waxyaalaha yaryar maxaa yeelay ALLAH ayaa wax ka weyn kuu leh.
❀ ilaahay wuxuu idin siiyaa GALGAL iyo IIMAAN marka maskaxdaadu ku tidhaahdo "is casilo" oo qalbigaaga hoostiisa waxay kugu odhanaysaa: ISKU DAY Mar Kaliya!
❀ Waxa ugufiican waa inaad noloshaada soo gasho, aamina oo sug.
The Duufaanta ka dib qaanso roobaadka ayaa iman doonta, waa axdigii ILAAH uu inala wadaagay. Isagu wuu ina jecel yahay, isaga ayuu si buuxda ugu kalsoon yahay.
Waxaan rabaa mid fv
Waxaan doonayaa inaan guuleysto hal maxaa yeelay waxaan u baahanahay mid fadlan
Ku jawaab Arianna
Waxaan ubaahanahay taleefanka gacanta, fadlan, calle rio mesa 17 zip code 29620
Ma aaminsani in bixintaani ay nasiib wacan u yihiin sumcadda si kastaba ha noqotee ...
fadlan waan rabaa
Ku jawaab reymar rendon
Waxaan jeclaan lahaa inaan kasbado taleefankaas, aan aragno haddii aan xoogaa nasiib leeyahay, waxaan u baahanahay taleefankaas si aan fasal ugu yeesho oo aan u sameeyo shaqadayda guriga.
Ku jawaab estefania ayovi
Runtii tani ma tahay?
Ku jawaab Haamiin
Hoyga Google wuxuu ku saleysan yahay Chromecast halkii laga isticmaali lahaa Android
Facebook waxay dooneysaa inay u keento fariin dhammaystiran illaa dhammaad ah Messenger